Maskax wanaagsan oo ku saabsan wax kasta waxay ku siin doontaa nolol farxad leh. - qarsoodi - Quotes Pedia
Rajada ayaa naga sii wadaysa. Waxay ina siisaa tamar si aan u sugno xitaa waqtiga dhibaatooyinka. Nolosha, waxyaabaha waligood uma socdaan sidii loogu talagalay. Dhamaan waddooyinka oo dhan waxay lahaan doonaan qallooc laakiin waxaan ubaahanahay inaanu joogno oo aan ka gudubno waxyaabahaas oo dhan oo caqabad ku noqday.
Waa inaannaan niyad jabin ama aan dareemayn inay waxa qaldan oo dhan innaga oo keliya ku dhacayaan. Hareeraha fiiri. Qof walba wuxuu leeyahay qaybtiisa dhibaatada. Laakiin noloshu waxay ku saabsan tahay dhexgalka iyaga hadana helitaanka farxad.
Si aad ugu noolaato nolol farxad iyo raynrayn leh, waxaa muhiim ah inaan lahaano maskax wanaagsan. Waxay ina siinaysaa dhiirrigelinta inaan hore u sii soconno oo xitaa aan qabanno waxyaabo aanan haddii kale maleynaynin.
Dhiirrigelinta, dhiirigelinta iyo qalbiga in wanaag la sameeyo waxay noo keeni karaan waxyaabo ka sarreeya mala awaal. Markaan dareemno niyad jab, waxay had iyo jeer faa'iido u leedahay in aan isku hareereyno figrado fiican iyo dad wanaagsan.
Waxay nagu dhiirigeliyaan inaan la qabsanno dhibaatooyinkeenna. Xitaa haddii aanan helin dad kale oo nagu xeeran, waa inaan nafteena raadsano awood aan kula dirirano dhibaatooyinkeena. Waqti ka dib, xoogani wuu kordhayaa oo wuxuu inaga dhigayaa qof aad u adag.
Haddii aan haysanno maskax wanaagsan oo aan baranno inaan eegno dhinacyada wanaagsan ee waxyaabaha inta badan, ka dib farxad ayaa si fudud dariiqa loo maro. Waxaan baranaa inaan ka mahadcelino oo uga mahadnaqno waxa aan haysano. Waxaan u qiimeyneynaa waxyaabo badan oo aad ayaan ugu riyaaqnaa aad iyo aad ayaan u jeclahay farxaduna farxaddu waxay kordhisaa laab laabyo badan Markaa, annagaa is aragnay ku faraxsan oo nolosha ku qanacsan.
Xigasho Life Life
Quotanka maskaxda ee toosan
Quotiska Mindset togan
Si kasta oo ay u wanaagsan yihiin ama xun yihiin waxaad u malaynayso inay noloshu tahay, maalin kasta hurdada ka kac oo nolosha ugu mahadnaq. Qof meel kale jooga ayaa u dagaallamaya si ay u noolaadaan. - Qarsoodi
Si kasta oo ay u wanaagsan yihiin ama xun yihiin waxaad u malaynayso inay noloshu tahay, hurdada ka kac maalin kasta oo uga mahadceli…
Marka noloshu ay kugu geliso xaalado adag, ha dhihin “maxaa aniga”, dheh “isku day”. - Qarsoodi
Marka noloshu ay kugu geliso duruufo adag, waligaa ha dareemin in sababtaas ay adiga kugu dhacday. Had iyo jeer isku day…
Farxadu ma aha waxaad adigu rabto. Waa qadarin waxa aad haysato. - Qarsoodi
Dad badan baa halkaas ka soo baxay oo iyagu mar uun helay wixii ay waligood jeclaan jireen…
Marna ha ku mashquulin inaad la kulanto qof cusub. - Qarsoodi
La kulanka qof cusub had iyo goor waa fikrad fiican. Waxay u egtahay sida ogaanshaha adduunyo cusub, cilmi nafsi cusub, iyo…